Shiinaha Runjin © Krunt ™ -N1000 Soosaarida Mashiinka Qaboojiyaha iyo Warshad | Runchen
Runjin © Krunt ™ -N1000 Mashiinka Qaboojiyaha Jalaatada
Hadda wax weyddii Soo Degso
Qaboojinta, isku darka iyo karbaashka jalaatada iyo hawo barafka. Alaabta kale oo la keydsho
Isku-darka jalaatada waxaa lagu cabbirayaa silsiladda qaboojinta iyadoo la adeegsanayo matoor. Hawo joogto ah ayaa lagu quudiyaa dhululubo isku dhafan. Inta lagu gudajiro marinka marinka hawada hawo baa kudhacaysa dhasher. Dareeraha ammonia ee uumi baxa jaakada qaboojinta ee ku hareeraysan dhululubada ayaa keenta qaboojinta. Baalayaasha birta ah ee birta ah ayaa jalaatada barafaysan ka xoqaya darbiga gudaha dhululubo, iyo bamka labaad ee giraanta ayaa jalaatada ugu gudbinaya mashiinka buuxinta dhamaadka cirifka qaboojiyaha.
Frunt ™ -N1 qaboojiyeyaal isdaba joog ah waxay la kulmaan 3-A calaamadda heerarka nadaafadda ee Ururka Cuntada & Soosaarka Warshadaha Cuntada, USA. Qalabka qaboojiyaha iyo nidaamka qaboojiyaha waxay ka samaysan yihiin bir bir ah. Dhammaan qaybaha la xiriira isku-darka iyo jalaatada waxay ka sameysan yihiin bir bir ah.
Rakibaadda Qaboojiyeyaasha si toos ah waa cutubyo iskood u kooban oo diyaar u ah inay ku xirmaan korantada, qaboojiyaha, hawo cadaadis leh iyo isku dhafis.
Dhululubada qaboojiyaha wuxuu ka samaysan yahay nikkel saafi ah dusha dushiisuna waa chromium adag oo la dahaadhay oo muraayad lagu dhammaystiray. Dashher-ka, oo ay ku qalabaysan yihiin xoqooyin xoqan iyo garaacis, ayaa ka sameysan bir bir ah.
Nidaamka qaboojiyaha waxay siisaa awood qaboojin joogto ah si loo hubiyo in heerkulka jalaatada deggan iyo naftiisu ay jirto. Inta lagu jiro xilliyada joogsiga iyo mar kasta oo qaboojiyaha la xidhayo tusaale ahaan la xiriirta joogsiga degdegga ah, gaaska kulul ayaa la mariyaa si looga hortago qabow-up Sahayda ammonia ee dareeraha ahi waa inay ahaataa mid aan uumi-bixin oo leh ugu yaraan cadaadis buuxda oo ah 4 baararka (58psi) heerkulka nuugistuna waa inuu noqdaa -34 ℃ (-29 ℉).
Wadid. Awoodda waxaa si toos ah looga wareejiyaa mootada weyn aaladda V-belts.
Isku qas iyo bambooyin jalaato ah waa bambooyin maareyn, lagu hagaajin karo nadiifinta dhamaadka si loo magdhabo dharka caadiga ah. Gudaha guryaha birta ah ee birta ah waa chromium dahaadhay si loo yareeyo xirashada noocaas ah.
Joogsi degdeg ah Waxay u oggolaaneysaa joogsi ku-meelgaar ah soo-saarista iyada oo luminta ugu yar ee isku-darka iyo isbeddelka tayada jalaatada.
CIP (Meel nadiif ah) Dhammaan qaybaha xiriir ka hela isku dhafka iyo jalaatada waa la nadiifiyaa iyadoon la kala bixin. Markaad dhaqaajiso barnaamijka CIP foomka koontaroolka, giraangiraha mashiinka soo baxa iyo giraangiraha giraangiraha galka ayaa kala baxa oo u oggolaada qulqulka culus ee saabuunta. Bambooyin iyo dhasher si otomaatig ah ayaa loo hawlgeliyaa xilliyada qaarkood inta lagu jiro hawsha nadiifinta.
Hawo cufan ka imaadka saadka ugu muhiimsan ayaa loo baahan yahay si loo xakameeyo buuxinta iyo matoorka CIP.
Gudiga xakamaynta. Dhammaan howlaha mashiinka waxaa laga shaqeeyaa qeybta hore oo ay ku jiraan mitir loogu talagalay culeyska mootada, cabirka cadaadiska hawada, bilowga iyo joojinta badhamada riixida bambooyin iyo mootada weyn iyo sidoo kale gacan ku haynta kontoroolka ammonia. Xawaaraha saar waa la hagaajin karaa 10 ~ 100%.
Isku qas awoodda bamka wuxuu ka socdaa 80 ~ 550Litre / hr (21 ~ 145 US Gal).
Qalabka caadiga ah waxaa ka mid ah xirmo qalab ah, jaangooyooyin jaangooyooyin ah, daboollo loogu talagalay beddelka cadaadiska dhululubo iyo miisaanka min. xawaaraha dasher.
Jirka mishiinka lagu keydsho
Jirka mashiinka lagu keydsho wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah. Laba dhinac oo ahama ah oo ah mishiinka dhaxanta ayaa laga saari karaa, si loo fududeeyo shaqaalaha dayactirka si ay u dayactiraan qaybaha kale ee qalabka.
Dusha sare ee durbaanka dhaxanta ayaa ah dahaadh chromium adag oo si sax ah u shiidaya, si loo gaaro waxaa jira dusha sare oo jilicsan, sidaas darteed waxyaabaha jalaatada isku dhafan waxay heli karaan isweydaarsiga kuleylka ee wanaagsan iyo saameynta qabow ee waxtarka leh. Waxay ku qalabeysan tahay xoqid leh birta birta ah ee birta ah oo si isdaba joog ah ugu wareegeysa xawaare gaar ah dusha sare ee durbaanta dhaxanta, si loo hubiyo inay jirto wax soo saar habsami leh oo ka sameysan waxyaabaha jalaatada dufanku ku fiican yahay, kaas oo awood u leh inuu kiciyo qaybaha masaxa. mootada weyn iyada oo loo marayo suunka gudbinta
Nidaamka qaboojiyaha wuxuu ku dhisan yahay compress-ka nooca wax lagu shaabadeeyo ee muquuninta ah wuxuuna u isticmaalaa Freon qaboojiyaha
Bamka isku qasida hawada
Waxay ku yaalliin qeybta hore ee mashiinka qaboojinta, waxaa ku yaal hawo habeyn ah soo galida hawada, si loogu shubo qulqulka iyo hawada durbaanka qaboojinta.
Cadaadiska cadaadinta waalka
Goobta jalaatada ee durbaanka barafka, waxaa ku yaal waalka hagaajinta cadaadiska, si cadaadiska durbaanka barafku uu u ahaado mid joogto ah.
Hawlgalka Mashiinka Qaboojinta
Dhammaan badhannada shaqeynaya waxay ku yaalliin dhinaca hore, si fudud oo fudud loo isticmaali karo.
Oo ay ku jiraan kuwan soo socda ee ku biiro hawlgalka:
l Startup / bamka isku dhafka dhow
l Bilaabidda / isku xidhka qalabka kiciya
l Nidaamka qaboojiyaha ee xawaaladaha / xiridda
l Bilaabida / xiro nidaamka gaaska kulul
l Xakamaynta mugga wax soo saarka jalaatada
l Bandhigga nafwaayay jalaatada
Bilawga Mashiinka Qaboojinta
Waa mid aad u habboon oo si toos ah ayaa loo shaqeyn karaa ka dib marka biyaha, korontada iyo gaaska la shito.
Nadiifinta Mashiinka Qaboojinta waxaa lagu sameyn karaa iyada oo la isku xiro nidaamka dhexe ee CIP. Isku xidhka dhuumaha ayaa qaadanaya buunbuuninta
Soosaarka caadiga ah
1000Litre / hr (270 US Gal) saldhig ka hooseeya xaalada:
Heerkulka isku dhafka ah ee gudaha + 5 ℃ (+ 41 ℉) Heerkulka jalaatada ee soo baxa -5 ℃ (＋ 23 ℉) Heerkulka nuugista -34 ℃ (-29 ℉)
Saliida ku jirta ammonia <30PPM
Xad dhaaf 100 ％
Nooca isku dhafka: Isku darka jalaatada caadiga ah ee ka kooban 38% wadarta adag. Marka la helo isku-darka dhabta ah ee isku-darka ah waxaa la go'aamin karaa karti qeexan iyo heer kul.
Frunt ™ -N1 Qalabka Ikhtiyaariga ah
Waalka seddex geesood ah oo leh qalab loogu talagalay dhuumaha ka baxa jalaatada.
Qiyaasta cadaadiska jalaatada oo leh qalab loogu talagalay dhuumaha ka baxa jalaatada.
Qiyaasta heerkulka jalaatada oo leh qalab loogu talagalay dhuumaha ka baxa jalaatada.
Mashiinka quudinta miraha si loogu quudiyo dhadhanka dareeraha iyo midabaynta saamiga qaarkood ee dhululubo baraf ah.
Jooji filtarka qaboojiyaha.
Waalka badbaadada TüV waa la ogolaaday - waalka badbaadada ee nidaamka qaboojiyaha ayaa loo baahan yahay - naqshad dhab ah sida ku cad qawaaniinta deegaanka.
Xawaaraha xawaaraha xawaaraha dasher hagaajinta stepless.
Naqshad Freon. Si gaar ah loogu talagalay Freon 22. xoogaa hoos u dhig awoodda.
Mitirka socodka hawada si loo xakameeyo xad-dhaafka.
Qalabka qalajinta iyo sifeynta si loo hagaajiyo tayada hawada la cadaadiyey.
Qaybaha dayactirka loogu talagalay 3000hrs ama 6000hrs dayactir.
Isku xirka awooda 3 ~ 380 V ， 50 HZ
Isticmaalka awoodda 17 kW
Mashiinka ugu weyn 15 kW
Mashiinka Mashiinka 0.75 kW
Ugu badnaan rar qaboojiyaha 30 kW26000 kcal / h (34 ° C / 29 ° F heerkulka nuugista)
Mawduuca Amonia 12 kg (NH3)
Hawo cufan 2 n m³ / h (min. 6 cadaadiska bar)
Awoodda mashiinka 200/1000 Liter / saac52-260 US Gal / hr (100% barar)
Cabbirka tuubbada (waa inuu u hoggaansamo qawaaniinta maxalliga ah)
Khadadka nuugista Ø48 mm
Khad dareere ah Mm 18 mm
Khadadka gaaska kulul Mm 18 mm
Khadka bullaacad Mm 18 mm
Khadadka badbaadada Mm 18 mm
Khadadka tubbada hawo-qaadashada Mm 6 mm
Isku qas qasabadaha tubbada 25.4 mm
Jalaatada ka bixitaanka jalaatada Ø 38.1 mm
1 bar1 litir
= 1.02 kp / cm² = 100 kPa = 14,5 psi= 0.2642 US gallon
Cabirka ugu weyn
Hore: Runjin © Krunt N -N600 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Xiga: Runjin © Krunt ™ -N1200 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Runjin © Krunt ™ -N2000 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Runjin © Krunt N -N600 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Runjin © Krunt ™ -N300 Mashiinka Qaboojiyaha Jalaatada
Runjin © Krunt ™ -N1200 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Runjin © Krunt ™ -N50 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada